को बन्छ ? च्याम्पियन : नेपाल कि सिगापुर – onlinekhelkhabar.com
को बन्छ ? च्याम्पियन : नेपाल कि सिगापुर
अनलाइन खेल खबर संवाददाता	Posted on २६ आश्विन २०७५
असोज २६ , अनलाईन खेलखबर || मलेसिया मा जारी बिश्वकप छनोट एसिया (पुर्बी ) प्रतियोगिता को अन्तिम खेल मा नेपाल ले आज सिगापुर को सामना गर्दैछ ।
आज हुने खेल अघोषित फाईनल नै रहेको छ । जुन टिम ले खेल जित्छ उहीँ नै प्रतियोगिता को च्याम्पियन बन्ने छ ।
प्रतियोगिता भर अपराजित रह्दै नेपाल र सिगापुर उत्कृष्ट २ भित्र रहेका छ्न । अंकतालिका मा नेपाल रनरेट मा केहि माथी रह्दै तालिका को शिर्षस्थान मा रहेको छ ।
प्रतियोगिता को एकमात्र उपाधी को दाबेदार नेपाल ले यसअघि का ५ खेल हरु मा शानदार नतिजा निकालेको छ । भने सिगापुर ले पनि त्यो लय मा आफु लाई खडा गरेको छ ।
पहिलो खेल मा म्यानमार लाई ८ बिकेट ले पराजित गर्दा दोस्रो खेल मा आयोजक मलेसिया लाई पनि ८ बिकेट ले पराजित गर्न सफल भएको थियो । यस्तै तेस्रो बर्षा ले प्रभावित हुन पुगेको खेल मा थाइल्याण्ड लाई डिएल मेथड मार्फत १४० रन पराजित गरेको थियो ।
चौथो खेल मा नेपाल ले भुटान लाई १ सय १७ रनको बिशाल अन्तर ले पराजित गरेको थियो भने आफ्नो पाचौँ खेल मा नेपाल ले चीनलाई १० बिकेट ले पराजित गर्न सफल भएको थियो ।
यसपछि तेस्रो अर्थात् अन्तिम चरण को रुपमा बिश्वकप को ग्लोबल छनोट प्रतियोगिता रहेको छ ।जहाँ आईसीसीको वरियतामा २०१८ डिसेम्बरसम्म ११ देखि १६ बरियता मा रहेका रास्ट्र र विभिन्न क्षेत्रिय छनोट पार गरेर आएका ८ गरि कुल १४ टिम ले ग्लोबल छ्नोट प्रतियोगिता मा भाग लिने छ्न । यहाँ बाट उत्कृष्ट ६ टिम ले अस्टेलिया बिश्वकप को टिकट पक्का गर्नेछ्न ।
बिश्वकप सम्म पुग्न नेपाल ले अब २ प्रतियोगिता पार गर्नु पर्नेहुन्छ , जसमा क्रमश नै प्रतियोगिता कठिन कठिन हुँदै जानेछ ।अहिले को अबस्थामा नेपाल को सम्भावना भने प्रबल देखिएको छ ।
Previous Postनेपाल सहित सिगापुर र मलेसिया बिश्वकप छ्नोट प्रतियोगिता को दोस्रो चरण प्रबेश
Next Postसिगापुर द्रारा नेपाल लाई सामान्य लक्ष्य प्रस्तुत : सन्दिप को उत्कृष्ट बलिग प्रदंशन